မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ကျောက်မျက်ရတနာ
တစ် ဦး ကျောက်မျက်ပြန်သွားဖို့လိုအပ်ပါသလား? gem.agency ကလွယ်ကူစေသည်။
ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကိုအခြားအရာများထက်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းသည်။ သင်၏ကျောက်မျက်ရတနာများကိုလက်ခံရရှိပြီးရက် ၃၀ အတွင်းသင်သည်သင်၏အမှာစာကိုမကျေနပ်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမူလနှင့်ပျက်စီးခြင်းအခြေအနေသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။ ဤရက် ၃၀ ကိုစစ်ဆေးသည့်ကာလအတွင်းကျောက်မျက်များကိုသာပြန်ပို့နိုင်သည်။
တစ် ဦး အဘို့အ GEMIC အီးမေးလ်ပို့ပါ Return Authorization Number (သို့ပွေးလေ၏) နှင့်နောက်ထပ်ပြန်သွားညွှန်ကြားချက်များ။
NB: တစ် RAN မပါဘဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာ၏အမိန့်ငြင်းဆန်ပေးပို့သူမှပြန်လာသောလိမ့်မည်။ သို့ပြန်သွားသည်ထုပ်ပိုးနှင့်ရေကြောင်းအခကြေးငွေပေးပို့သူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးရောင်းအား (ပြန်လာသောပစ္စည်းများလက်ခံရရှိလျှက်အမိန့်၏နေ့စွဲ၏ 30 ရက်အတွင်း postmarked ရပါမည်) 30 ရက်အကြာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
စာတိုက်ပေးပို့မငြင်းမပယ် ကျေးဇူးပြု. , သင်ကတင်ပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ဒါပေမယ့်အပ်ခဲ့ရှေ့မှာအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်။ အမိန့်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်လျှင်, ဖောက်သည်ပျောက်ဆုံးလျှင်ပစ္စည်း၏အပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုများအတွက်တာဝန်ကိုခံရနှင့်၎င်း၏ပြန်လာအပေါ်သို့မြှုတ်အားလုံးအရစ်ကျစွဲချက်များနှင့်တာဝန်ရကြလိမ့်မည်။
နိုင်ငံအများအပြား၌, တင်ပို့ရောင်းချမှုသက်ဆိုင်သောအကောက်ခွန်ကြေးနှင့်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်လက်အကြွေးမဆိုအကောက်ခွန်, အခွန်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအဘို့အတာဝန်ရှိသည်။ ကြောင့်ဖျောပွထားပြန်ခွင့်ပြုချက်မရပါ။
** အားလုံးပြန်အမ်းငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိကဲ့သို့တူညီသောနည်းလမ်းကနေတဆင့်လုပ်နေကြတယ်။ သင်္ဘောတင်ခ, အာမခံနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်သည် non-အမ်းဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမ restocking အခကြေးငွေရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအစားထိုးပူဇော်ကြ၏။
GEMIC သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏သတင်းအချက်အလက်သည်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။
အားလုံးငွေပေးချေမှုနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ကို PayPal အားဖြင့်လုံခြုံတဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကိုင်တွယ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကို access ကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည်။ PayPal ကလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လေးစားသည်။ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာအားယာယီ အသုံးပြု၍ အီးမေးလ် (သို့) အမိန့်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာ, ဘရောင်ဇာပုံစံများ, သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရောင်းဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
GEMIC သည်သင်၏အင်တာနက်စာမျက်နှာလှည်းကိုဖွင့်ရန်ဘရောက်ဇာ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို cookies များတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန် cookies များကိုဖွင့်ထားရမည်။
သင်သည်သင်၏လှည်းတစ်ခု item ကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါသင်ကလက်မှတ်အမိန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, link ကို click နှိပ်ပြီး “ ဒီပစ္စည်းအတွက်ကျောက်မျက်လက်မှတ်ကိုထည့်ပါ” အထက်ပါပစ္စည်းအသေးစိတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် "စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်" ခလုတ်ကို။ ဒါကလက်မှတ်ရွေးချယ်စရာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပစ္စည်းများကိုအာမခံနေကြတယ် GEMIC မှာ။ သင်ပေးချေသမျှကိုသင်အမြဲရရှိရန်အာမခံပါသည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း GEMIC ရှိကျောက်မျက်အားလုံးသည်အာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများသည်ကျောက်မျက်တစ်ခုစီကိုသေချာတိုင်းတာ။ တိုင်းတာသည်။
GEMIC မှရရှိသောကျောက်မျက်ရတနာသည်ကမ္ဘာမြေမှပြုလုပ်သောသဘာဝကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒြပ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီး "ကျောက်မျက်" အတွက်ကိုင်တွယ်ကြဘူး။
အဘယ်အရာကိုသင်ကြည့်ရှုပါ, အဘယျသို့သင်က Get
အားလုံးမှတ်အထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 100% ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအနားမှာရပ်နေသကဲ့သို့ငါတို့သည်ငါတို့၏ကျောက်မျက်များကရပ်တယ်။
ငွေပေးချေမှုရမည့် Options ကိုနှင့်မူဝါဒများ
စစ်ဆေးခြင်း-ထဲက, ဘေးကင်းလုံခြုံလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူလွယ်ကူသည်။
PayPal ကနေတဆင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင် (မျှ PayPal ကအကောင့်လိုအပ်)
PayPal ကဗီဇာ, ဗီဇာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်, ဗီဇာ Electron, Master Card, Eurocard, Maestro နှင့် American Express ကလက်ခံခဲ့သည်။ PayPal ကလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်.
သင်၏ PayPal အကောင့်နဲ့ပေးဆောင်
ကျနော်တို့ကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု PayPal ကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါပြီ။
မှတ်စု: သငျသညျ account တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်, သင်အလွယ်တကူ on-screen ကိုလမ်းညွန်အောက်ပါဖြင့်အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
Western Union လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်
Western Union လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ရတဲ့အခါ, သင့်ပစ္စည်းများသုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားကြလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့လွှဲပြောင်းဘို့ကိုထူးခြားတဲ့ပိုက်ဆံငွေပေးငွေယူအရေအတွက် (MTN #) အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ထိုရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process ပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ရတဲ့အခါ, သင့်ပစ္စည်းများသုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားကြလိမ့်မည်။ သငျသညျငွေပေးချေမှုအစပျိုးခဲ့ကြတခါကိုဘဏ်ငွေလွှဲရည်ညွှန်း code ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ထိုရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏စျေးဝယ်လှည်းကိုကြည့်ပြီးသင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါရေကြောင်းနည်းလမ်းများနှင့်နှုန်းထားများနှစ်ခုဆက်ကပ်; Fedex (၃-၇ ရက်)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်း (၁၀-၂၁ ရက်)
“ ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်” ကိုနှိပ်ပြီးသင်၏ရေကြောင်းလိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီး“ ယခုငွေပေးချေခြင်း” ကိုနှိပ်ပါ။
မှတ်စု: သင်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမိန့်အတည်ပြုအတည်ပြုအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်သေချာစေရန်အလို့ငှာသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှမည်သည့်အီးမေးလ်မှမရရှိပါကသင်၏ spam သို့မဟုတ် junk email folder ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် PayPal ငွေပေးချေမှုများကိုမည်သည့်ငွေကြေးဖြင့်မဆိုယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Western Union မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေငွေပေးချေမှုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
PayPal နှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘဏ် (ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပေးသည့်ဘဏ်) သည်ငွေကြေးများကိုပြောင်းလဲရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိထိုငွေကြေးရှိစျေးနှုန်းများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်။
GEMIC သည်ပြသသည့်ပမာဏကိုသာအားသွင်းလိမ့်မည်။ မည်သည့်အပိုထပ်ဆောင်းအခကြေးငွေမဆို PayPal ၏ဘဏ်၊ Western Union ၏ပေါ်လစီများပေါ်မူတည်ပြီး၊
သင်ငွေပေးချေရာတွင်အခက်အခဲရှိပါကသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ အခမဲ့ပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောင်္တင် Options ကိုများအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ ကျေးဇူးပြု. :
အမြန်သဘောင်္ - ဒေါ်လာ ၃၅
အမြန်တင်ပို့မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးအွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းတိုင်းခြေရာခံနိုင်သည်။ ကှကျအပြည့်အဝအာမခံထားကြသည်။ ပေးပို့ပြီးနောက်လက်မှတ်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံအများစုအတွက်တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိဖြစ်သည်။ PO box များ (ယူအေအီး၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကူဝိတ် မှလွဲ၍)၊ APO သို့မဟုတ် FPO လိပ်စာများကို အသုံးပြု၍ မရပါ။
မှတ်စု: သင့်တွင်“ ဖိုင်ပေါ်တွင်လက်မှတ်” ရှိပါကဤခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန် EMS ကိုခေါ်ပါ။ 'file on signature' ကြောင့်လက်မှတ်မပါဘဲပို့ဆောင်ခြင်းခံရသော packets များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှမပေးနိုင်ပါ။
ပုံမှန်မှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ် - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇
ကျနော်တို့နိုင်ငံပေါင်း 120 ကျော်မှမှတ်ပုံတင်ထားသောလေကြောင်းလိုင်းကိုဆက်ကပ်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောစာကို USD 200 အထိအာမခံထားသည်။ တင်ပို့မှုသည်အလုပ်ချိန် ၁၀-၂၁ ရက်ခန့်ကြာပြီး၊ ပို့ပြီးသည့်အခါလက်မှတ်ထိုးရန်လိုသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပို့ကုန်မရှိပါ
'ရရှိနိုင်' အဖြစ်ပြသအားလုံးကျောက်မျက်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ချက်ချင်းတင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အမှာစာများကိုတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ (ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ) ၁ ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်သည်။
နိုင်ငံအများစုတွင်စနစ်တကျကြေငြာထားသောတင်ပို့ခြင်းများသည်အကောက်ခွန်နှင့်အခွန်များဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်သည်ပိုကြာသည်၊ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများကိုရှောင်လေ့ရှိသည်။ လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။ သို့သော်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
မှတ်စု: သွင်းကုန်ခွန်သို့မဟုတ်အခွန်သည် ၀ ယ်သူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစွဲချက်ကြောင့်ငြင်းဆန်သောပြန်လာသောတင်ပို့မှုကိုလက်ခံမရပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အထူးအစီအစဉ်များလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
GEMIC မှ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးတွင်ငွေတောင်းခံလွှာပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင့်ရဲ့အမိန့်အားမရရှေ့မှာသင့်တဲ့စိတ်ကြိုက်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမငွေတောင်းခံလွှာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်။
ကျောက်မျက်များကိုသတ်မှတ်သည့်အခါ GEMIC သည်အောက်ပါရှင်းလင်းသည့်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုသည်။
IF : Loupe clean - အတွင်းပိုင်းအပြစ်ကင်းစင်; ပါဝင်မှုအခမဲ့။
VVS အမှိုက်သရိုက်နီးပါး - ပါဝင်မှုအနည်းငယ်၊ အနိုင်နိုင် 10x ချဲ့အောက်မှာမြင်နိုင်ပါဝင်နိုင်။
VS မျက်လုံးသန့်ရှင်းခြင်း - ပါဝင်မှုအနည်းငယ်သာ၊ အနည်းငယ်ပါဝင်မှုများကိုလေ့ကျင့်ထားသောမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် ၁၀x ချဲ့ခြင်းအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
SI ဖြေ - နည်းနည်းလေးပါ ၀ င်တယ်။
I ပါဝင်တယ် - ပါဝင်မှုတွေကိုမျက်စိမမြင်ဘဲမြင်နိုင်တယ်။